Our Board - Society Society
Mpikambana ao amin'ny biraon'ny Fikambanana Mpandraharaha
Ny Filankevitry ny Fikambanana Mpandraharaha dia miresaka ny ekipan'ny ekipanay. Anisan'izany ny traikefa maro, ny fahaizana ary ny fandraisana andraikitra. Ny Birao dia manara-maso ny fikambanana mahasoa sy ny asany.
Manome toky izy ireo fa eo amin'ny lalana isika, mitarika sy manohana antsika handrava sehatra vaovao. Mitodika amin'ireo olona izay mizara ny fahitantsika isika hanova izao tontolo izao ary hangataka azy ireo hitarika antsika amin'ny fahalalana, ny traikefa ary ny hafanam-pony.